लकडाउनमा हाडजोर्नी तथा नशाको समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ – Health Post Nepal
लकडाउनमा हाडजोर्नी तथा नशाको समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ
२०७६ चैत ३० गते १२:२१
देशभर ९ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण, उपत्यकामा ३२६
कोरोना संक्रमणको डर : ओलम्पिक रोक्न माग, टोयटा कम्पनीले विज्ञापन नदिने
विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल यतिखेर लकडाउन अवस्थामा छ । चैत्र ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन वैशाख ३ सम्म रहनेछ ।
अझै लकडाउनको समय लम्बिन सक्ने संकेत सरकारले दिएको छ । यसो हुनु भनेको लामो समय घरभित्रै बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि परिर्वतन हुनु हो ।
दैनिक काममा व्यक्त हुने मानिसहरु घरभित्र नै बस्नुपरेको छ । यसरी लामो समय घरमा बस्दा हार्डजोर्नी तथा नशामा पनि समस्या देखिने गर्दछ । लकडाउनको समयमा हाडजोर्नी तथा नाशाबाट बच्नका लागि उमेर र ठाउँ विशेषका व्यक्तिले फरक—फरक शारीरिक अभ्यास गर्न सक्दछन् ।
हाडजोर्नी तथा नशाको रोगबाट बच्नका लागि उमेर अनुसारका मानिसले फरक फरक शारीरिक अभ्यास गर्न सक्दछन् ।
बालबच्चा, बयस्क र बृद्धबृद्धालाई फरक फरक व्यायामको आवश्यकता हुन्छ । यस्ता कुरामा ठाँऊ विशेषले पनि फरक हुन्छ । सर्वप्रथम सहर बजारमा मानिसहरु लकडाउनको समयमा बाहिर निस्कने ठाऊँ हुँदैन । उनीहरु दिनभर सुत्ने वा सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुन्छन् ।
दिनभर सुत्नु मानिसहरुका लागि राम्रो मानिदैन । सामान्यतः बच्चा र बढ्दो उमेरका लागि ८ घण्टा, बयस्कको लागि ६ घण्टा भए पुग्छ । तर, अहिले मानिसहरु फुर्सदिला हुँदा धेरै सुत्ने गरेको पनि पाईन्छ । त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।
टिभी, ल्यापटप तथा मोवाईल चलाउँदा पनि सुतिसुति चलाएको पाईन्छ । यसले गर्दा नशा र हाडजोर्नीमा असर पार्दछ । यस कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक रुपमा दिन कटाउन भन्दा कुनै कुरामा सिर्जनसिल बन्नु पर्दछ ।
लकडाउनको समयमा शारीरीक व्यायामको पनि आवश्यकता त्यति नै छ । अहिले मानिसहरु घरभित्र नै बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा बच्चासंगै अभिभावकहरु पनि शारीरिक अभ्यास गर्न सक्छन् । घरभित्र वा घरवरिपरी खेल्न मिल्ने खेलहरु खेलेर शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छन् । जस्तै जगिङ, प्राणायम, स्किपिङ, ब्याडमिन्टन जस्ता इन्डोर खेलहरु खेल्दा स्वास्थ्यका लागि राम्रो मान्छिन ।
करेसावारी छ भने त्यहाँ काम गर्ने, घर वरिपरी हिड्न मिल्छ भने, कम्तिमा २० मिनेट दौडिनु पर्दछ । आफ्नो घरवरीपरी खाली जमिन छैन भने भ-याङको तलमाथि दौडिदा पनि राम्रो हुन्छ । योगा गरेर पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ । गाउँमा भने खेतीपाती लगाउने हुँदा उनिहरु शारिरीक रुपमा कुनै न कुनै माध्यमबाट व्यायाम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा लकडाउनको समयमा उनिहरुलाई हाडजोर्निमा त्यति असर पादैन ।
एकैछिन बस्दा जस्तो आसनमा बसेपनि हुन्छ । त्यसले खासै फरक पार्दैैन । तर,लामो समय काम गर्नुपर्दा ध्यान दिनुपर्छ । एकदम खाल्टो परेको, डल्कने कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त मानिदैन ।
मेरुदण्डलाई कसरी बचाउने
नशा तथा हाडजोर्नीलाई स्वस्थ राख्नका सुत्ने र बस्ने आसनले पनि फरक पार्दछ । ८० प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै समयमा ढाड दुख्छ । यो रोग पनि होईन । तर, २० प्रतिशत डाढ दुखाई रोगले हुन्छ । ८० प्रतिशतलाई रोग नै चाहिँदैन । यस्तो खराव पोजिसनले गर्दा हुन्छ । निहुरिएर काम ग¥यो भने, वा कहिल्यै नगरेको असजिलो काम एकै पटक गर्दा पनि ढाड दुख्छ ।
सबै मानिसहरुको सुत्ने बानी एउटै हुँदैन । कसैको खुट्टा खुम्चाएर सुत्ने बानि हुन्छ । कोही उत्तानो परेर सुत्दछन् । आफुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसैगरी सुत्न आवश्यक छ । तर, बढि गद्दा भएको विस्तारामा सुत्नु स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मानिदैन । सुत्दाखेरी घाँटीको समस्या मेरुदण्डमा समस्या छ भने अग्लो सिरानी हानिकारक हुन्छ । नत्र साधरण सुत्दा आफुलाई सजिलो हुने गरी सुत्दा फरक पर्दैन ।
ढाड, कम्मर, घाँटी बढि दुख्ने प्रमुख कारण चाहीँ हाम्रो बसाई नमिलेर नै हो । काम गर्दा मानिसले एक आसनमा गर्छ । टिभि हेर्दा अर्को हुन्छ । त्यसले पनि हार्डजोर्नीमा असर पार्ने गर्दछ । यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । हामी लामो समयसम्म सोफामा ढल्केर टिभि हेर्ने, सिरानी पनि नमिलाई बस्छौँ भने हाम्रो हाडजोर्नी र माशपेशीमा असर पर्छ । सुत्ने समयमा भन्दा पनि कुर्सिमा बस्दा ध्यान दिनुपर्दछ । ड्राईभिङ्ग गर्दा पनि निहुरेर गर्नु हुँदैन । सिधा भएर नै गर्नुपर्छ । धेरै निहुरिएर काम नगर्ने, धेरै तौल भएको वस्तु उठाउँदा दुईहातले विस्तारै उठाउनु पर्दछ । घुँडा धेरै माडेर खुम्चाएर बस्नु हुँदैन । यी कुराहरुमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ ।
एकैछिन बस्दा जस्तो आसनमा बसेपनि हुन्छ । त्यसले खासै फरक पार्दैैन । तर,लामो समय काम गर्नुपर्दा ध्यान दिनुपर्छ । एकदम खाल्टो परेको, डल्कने कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त मानिदैन । पछाडि सिधा भएको कुर्सि नै उपयुक्त मानिन्छ । विरामी भएको मान्छे पनि धेरै ढल्केर बस्नु भनेको अनुपयुक्त नै हो । सिधा कुर्सि नै राम्रो हुन्छ । फेसनका कुर्सीहरु फाईदाजनक छैनन् ।
(हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. पौडेलसँग वसन्त ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Tags: कोरोना संक्रमण, प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, मेरुदण्ड